अर्गानिक कृषि उपज किन जबर्जस्ती महँगो ? | Ratopati
अर्गानिक कृषि उपज किन जबर्जस्ती महँगो ?
personजयराम सिग्देल exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २८, २०७५ chat_bubble_outline0
फागुन २५ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भृकुटीमण्डपमा जारी तेस्रो अर्गानिक मेलाको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुराहरू यसरी पोष्ट गर्नुभयो, ‘हामीले अर्गानिकलाई किन महँगो बनायौँ र के स्वस्थ तरकारी सम्भ्रान्तका लागि मात्रै हो वा यो अधिकार आम मानिसको पनि ? यो तरिकाले हाम्रो अर्गानिक खेतीको भविष्य कतातिर जाला ?’
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसरी अर्गानिक भनिने कृषि उपजको उच्च मूल्यका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नै लेख्नुपर्ने भएपछिको अवस्था के होला ? के हामीले उत्पाादन गर्ने कृषि उपज सम्भ्रान्तहरूले मात्रै खानका लागि हो ? यसले एउटा कुरा स्मरण गराउँछ– गाउँका किसानले आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि खान नदिई घरमा बनाउने शुद्ध घिउ गाउँको मुुखियालाई दिएजस्तो ।
केही समयअघि हामीले ‘सिन्धुका’ (सिन्धुली, काभ्रे र काभ्रे जिल्लाका १४ वटा सहकारी र ४ हजार किसानले उत्पादन सुरु गरेको स्वस्थ कृषि उपज) को ट्रेडमार्क सार्वजनिक कार्यक्रममा एक जना सहभागीले मलाई कार्यक्रमपश्चात एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘जयरामजी ! यसरी स्वस्थ उत्पादन भनेर अर्गानिकमा काम गर्ने तपाईंहरूले उत्पादन गरेको तरकारी खाने मान्छे छन् ?’ एकछिन त म अक्मकाएँ, पछि उहाँले नै भन्नुभो, ‘अर्गानिक उत्पादन खाने मान्छे छन् र ? यो त असाध्यै महँगो हुन्छ त !’ यसले अर्गानिक उत्पादन र यसको औचित्यमाथि एउटा प्रश्न खडा गरेको छ भने मन्त्रालयका प्रवक्ताले जाहेर गर्नुभएको चिन्तासँग पनि मेल खान्छ ।
अर्गानिकलाई किन महँगो बनाइयो ?
अर्गानिक शब्द यति दुरुपयोग हुँदै गएको छ कि, अब मान्छे पनि अर्गानिक कि नन् अर्गानिक ? भन्न थालिसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय बढी सोधिने र विश्वासमा समेत सङ्कट आइसकेको अवस्था पनि छ ।
अर्गानिक यो कारणले महँगो हुन्छ भनेर पुष्टि गर्ने आधार के छ ? यो किन महँगो ? अर्गानिक नै भन्ने आधार के हो ? प्रमाणित गर्ने कुनै संयन्त्र छ वा छैन ? यस्ता खाले प्रश्नको सामना अहिले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
१२औं राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला प्रदर्शनीमा स्टल राखेका मित्र सुहृद चापागाईंले फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरे । उनले त्यो भिडियोमा बन्दा र काउली अर्गानिक हो वा होइन भनेर जाँच गरिएको देखाएका छन् । पास भएको भनेर ताली पड्काएको पनि देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने अर्गानिक भन्ने कुराको पुष्टि गर्नका लागि अब मेला वा प्राङ्गारिक बिक्री स्थलहरूमा चेकजाँच गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो । यी सबैको कारण भनेकै अर्गानिक महँगो हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु हो । अर्गानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुने कुरा पनि होइन । उत्पादनका हिसाबको कुरा गर्ने हो भने विषादी, रासायनिक मललगायतमा लाग्ने लगानी अर्गानिकमा लाग्दैन । विषादी हालेजस्तो फल्दैन भन्ने पनि हुन सक्छ । विषादी हाले जसरी नफल्न सक्छ तर यसका लागि प्राङ्गारिक फसल बढाउने तरिकाहरू पनि छन् भने जैविक विषादी र जैविक मल पनि सरकारले अनुदानमै उपलब्ध गराएको पनि छ ।
अर्गानिक उत्पादन अलि बढी परिमाणमा उत्पादन गर्ने, अर्गानिक उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन कता हो ? ढुवानी वा बिक्री वितरणका लागि अवस्था के छ ? यी सबै कुराहरूको आवश्यक तयारीका साथ काम गर्नु अहिलेको जल्दोबल्दो उपाय हो ।
अर्गानिक साँच्चै महँगो छ ?
नेपाल सरकारले ५ वर्षभित्र प्राङ्गारिक देश बनाउने भनेको छ । तर यसका लागि तयारी कस्तो छ वा यो सम्भावना के छ ? भन्नेमा चाहिँ कुनै ठोस विश्लेषण गरेको पाइदैन । जबकि यो अवस्था हेर्दा हामीलाई अर्गानिक देश बनाउन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने अवस्था छ । यसो भनिरहँदा के अर्गानिक उपज साँच्चै महँगो हो ? भन्ने प्रश्न पहिलो रूपमा आउने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा अर्गानिक उत्पादन हालको माटोको अवस्था र विषादीको बढ्दो प्रयोगले पनि उत्पादनमा समस्या छ । काभ्रे जिल्लामा कुल भूगागको ५.१ प्रतिशत जमिन समथर छ । जहाँ उत्पादनका हिसाबले विषादी प्रयोग गरिएको समाचार धेरै मिडियामा आउने गरेको छ । तर कूल भूभागको ५ प्रतिशतका कारण अन्य बाँकी खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादित उपजलाई पनि विषादी हालिएको करार गरियो ।
यसरी हेर्दा विषादी हालिने जमिन र नहाली उत्पादन हुने जमिनबाट उत्पादित उपजको वर्गिकरण गरी अर्गानिक बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन त्यति गाह्रो विषय पनि होइन र यो बजार भाउभन्दा निकै महँगो हुने पनि होइन । एकाथरीको प्रश्न के पनि छ भने अर्गानिक बनाउनका लागि जैविक मल वा गाईवस्तुको मल आवश्यक हुन्छ र वस्तु पाल्नुपर्दा महँगो पर्न जान्छ भन्ने तर्क पनि छ, यो ठीकै पनि छ । तर अर्गानिक असाध्यै महँगो पनि होइन । जबकि कुनै समय अर्गानिक मार्सी ७०० रुपैयाँमा पनि किन्ने मान्छे थिए भने अहिले १८० रुपैयाँमा पाइन्छ, यो पछिल्लो उदाहरण हो ।
अर्गानिक उत्पादनलाई यसरी जबर्जस्ती महँगो बनाउने हो भने प्रवक्ता सुवेदीले भन्नु भएझैँ यो सम्भ्रान्त वर्गका लागि हुन जान्छ भने कम मूल्यमा उत्पादित अर्गानिक उपजले पनि भोलि बजार नपाउने र विश्वसनीयतामा कमी आउने हुन सक्छ । यसकारण अर्गानिक कृषि उपजलाई अर्गानिक मूल्य नै कायम गरौँ नत्र विषादी प्रयोग जस्तो हानिकारक पनि हुन सक्छ ।